मोर्चालाई यस्तो छ दिल्लीको सन्देश? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मोर्चालाई यस्तो छ दिल्लीको सन्देश?
मंसिर २० । काठमाडौं, कूटनीतिक सूत्रहरूका अनुसार अहिलेकै अवस्था लम्बिए मधेस आन्दोलन मोर्चाको कमान्डभन्दा बाहिर जाने खतरा रहेको भारतको बुझाइ छ । ‘उनीहरू मोडरेट समूह हुन् जसको हातबाट तराईको राजनीति बाहिर गयो भने विखण्डनवादीहरूको हातमा जानेछ, पश्चिमाहरूको सहयोगमा सञ्चालित त्यो आन्दोलनले भारतको हितमाथि अर्को धावा बोल्नेछ,’ स्रोतले नयाा पत्रिकासाग भन्यो, ‘भारतका लागि त्यो दोब्बर चिन्ता हुनेछ । त्यसकारण उनीहरूलाई वार्तामा बसाएर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न भारतले प्रोत्साहित गर्नेछ । त्यसकै लागि उनीहरूलाई बोलाइएको हो ।’
को–कोलाई भेट्दै छन्?
मोर्चाका नेताहरूले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसाग भेट्ने लगभग पक्का भएको छ । भाजपाका महासचिव राम माधव, कंग्रेस आईका नेता डा। करण सिंह, जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादव, भाजपा नेता भगतसिंह कोस्यारी, माक्र्सवादी कम्युनिस्टका नेता सीताराम येँचुरी, सांसद डिपी त्रिपाठीलगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम छ ।
यस्ता छन् चार सुझाब
१) दिल्लीस्थित नेपाल मामिला जानकारहरूका अनुसार भारतले मधेसी दललाई सिमानाको अवरोध हटाएर आन्दोलनको स्वरूप बदल्न दबाबपूर्ण सुझाब दिनेछ । त्यसअघि नै भारतले उपप्रधानमन्त्री कमल थापामार्फत संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट यथाशीघ्र पारित गर्न सुझाब पठाएको छ । विधेयक पारित भइसकेपछि मोर्चालाई सीमाको अवरोध हटाउन थप दबाब दिने मुडमा दिल्ली छ । त्यस्तो भए नाकाबन्दीको दोषबाट मुक्त पनि हुने र नेपालसागको राजनीतिक इन्गेजमेन्ट सहज हुने उसको बुझाइ छ ।
२)नेपालका दल र मधेसी मोर्चा छलफलबाटै मधेसका जायज माग पूरा गरून् भन्ने भारत चाहन्छ । मधेसी दलहरूले एकीकृत नेपाल र संविधानको फ्रेमवर्कमा बसेर समस्याको समाधान गर्नेबाहेकका विकल्प भारतको हितमा नहुने उसको बुझाइ छ । यसबारे भारतीय संस्थापन पक्षले मोर्चाका नेताहरूलाई विस्तृत सुझाब दिनेछ ।
३) भारत मोर्चाको सहयोगले संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन चाहन्छ । र, लगत्तै नाकाबन्दी फिर्ता गर्ने उसको योजना छ । त्यसो हुादा सरकार, मधेसी मोर्चा र मधेसी दलहरूको ‘विनविन’ अवस्था हुने उसको ठहर छ ।
४) पूरै तराई दुई मधेस प्रदेश बनाएर अहिले नै सीमांकनको मामिला टुंगिन सम्भव नहुने भारतको निष्कर्ष छ । अहिले प्राप्त उपलब्धि उपभोग गर्दै बााकी विषयमा छलफल गर्दै जानुपर्ने सुझाब उसले मोर्चाका नेताहरूलाई दिने जानकारहरू बताउछन् ।
दुई नेता दिल्ली पुगे, दुई आज उड्ने
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सदभावना फोरमका अध्यक्ष महेन्द्र यादव शनिबार राति पटना हुादै दिल्ली पुगेका छन् । भारत सरकारका अधिकारीले उनीहरूलाई विमानस्थलमा स्वागत गरेर होटेल ताजमा बसोबास मिलाएका छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आइतबार काठमाडौंबाट दिल्ली पुग्दै छन् ।
नेपाली दूतावास बेखबर
पूर्वमन्त्रीसमेत रहिसकेका चार मधेसी शीर्ष नेताहरूको भारत भ्रमणबारे नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास बेखबर छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन । राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न भुटानमा छन् । नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले शनिबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले पनि पत्रपत्रिका पढेर थाहा पायौ, भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी आएको छैन ।’ नयाँ पत्रिका ।
चिनियाँ अधिकारीबाट आयो यस्तो खबर तातोपानी नाका खोल्ने हो भने….
काठमाडौं । चिनियाँ अधिकारीले नेपालसँग ३२ महिनादेखि बन्द तातोपानी नाकाको संयुक्त सुरक्षा योजना माग गरेका […]
चिनियाँ राष्ट्रपति कहिले आउँदैछन् नेपाल भ्रमणमा ?
काठमाण्डौ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आगामी मार्चमा नेपाल भ्रमणमा आउने गरी तयारी सुरु भएको छ । […]
मेरठ लिटरेचर फेस्टिवलको सल्लहाकारमा समितिमा राधेश्याम लेकाली मनोनयन